बन्द गरिँदै मध्यभोटेकोशी, निर्धारित समयभित्र सक्न कठिनाइ
वैशाख १, सिन्धुपाल्चोक । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवस्थामा समेत निर्माण कार्य सूचारु राखिएको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोकिने भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकताको यो आयोजना (१०२ मेगावाट) निर्माण सामग्रीको अभावका कारण बन्द गर्न लागिएको हो । नेपाली र चिनियाँसहित दैनिक ७० कामदारबाट काम हुँदै आएकामा सिमेन्ट र आवश्यक केमिकल आपूर्ति हुन नसकेकाले बन्द गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख डा. सुनीलकुमार लामाले बताए । ‘कोरोनाको कारण निर्माण सामग्री आयात हुन सकेको छैन,’ लामाले भने, ‘स्टक सामग्री पनि सकिएको छ, अब निर्माण कार्य बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’
आयोजनाको चाकुस्थित बाँधको काम १ महीनाभित्र सम्पन्न हुने गरी तीव्रगतिमा सुचारु गरिएको थियो । आयोजनाको सम्झौताअनुसार शुरूदेखि नै चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित होङ्सी सिमेन्ट प्रयोग हुँदै आएको छ । हाल उक्त सिमेन्टको कारखानासमेत बन्द भएकाले अन्य सिमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा काम रोक्नुपर्ने बाध्यता आएको लामाले बताए । आयोजनाको ७ हजार ११८ मिटर लामो सुरुङमध्ये ६ हजार ६ सय १८ मिटर सम्पन्न भई ९३ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । त्यस्तै ६ मिटर उचाइ र ३७ मिटर लम्बाइको बाँधमध्ये ७० प्रतिशत र विद्युत्गृहको २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
१४ अर्ब ५० करोड लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना आगामी २०२० को डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पछिल्लो समयसीमा निर्धारण भएको छ । आयोजनाको सिभिल निर्माण चीनको वाङ्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन ब्यूरो र इलेक्ट्रिकको काम अस्ट्रिया एन्डिज हाइड्रोको भारतीय कम्पनीद्वारा भइरहेको छ । चिलिमे कम्पनीको सहप्रवद्र्धनमा निर्माण भइरहेको आयोजना सन् २०१३ डिसेम्बरमा शुरू भई २०१६ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर विसं २०७२ को भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र पटक–पटक आएको भोटेकोशी बाढीका कारण निर्धारित समयभन्दा ४ वर्षपछि धकेलिएको थियो ।
अहिले कोरोनाको कारण पछिल्लो पटक तोकेको समयसीमा भित्र आयोजना सम्पन्न हुन कठिनाइ देखिएको आयोजना प्रमुख डा. लामाले बताए । ‘हामीले तीव्रगतिमा काम गरिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर निर्माण सामग्री नै नभएकाले समयसीमा भित्र काम सक्क मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले निर्माण सामग्री आयात गर्न सहजीकरण गर्ने हो भने समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आपूmहरू तयार रहेको उनले बताए ।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको १२औं साधारण सभा सम्पन्न, १०.५३% लाभांश पारित
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलद्वारा राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण